पतिको रक्षार्थ तिजको व्रत ! अचम्म त मलाई त्यति बेला लाग्यो जुन बेला मेरो घर नजिकैको भाउजु एक्लै पर्नु भयो । दुई वटा स–साना नानीबाबु भएकी ति भाउजु सधैँ घर नजिकैको मन्दिर जानु हुन्थ्यो । शनिवारको दिन शनि महाराजको व्रत, एकादशीमा भात नखाइ व्रत, औंसी÷पूँर्णिमाको आफ्नै निति तिथि थियो उहाँको । मैले थाहा पाए सम्म उहाँले कुनै पनि वर्ष तिजको व्रत टुटाउनु भएको थिएन ।
एक दिन भाउजुलाई र मेरी आमा भन्दै हुनुन्थ्यो ‘किन औषधी खाइ–खाइ व्रत वसेकी ?’ त्यति बेला मलाई थाहा थिएन औषधी र व्रतको के तालमेल हुन्छ भनेर । निकै पछि थाहा भयो, त्यो औषधी भनेको त महिनावारी रोक्नलाई खाने हो रैछ । उनले व्रत बस्न नजानेको हो ? वा पण्डित जी ले पुजा उल्टो गराएको हो ? अथवा भगवान भन्ने चिजै हुँदैन यो संसारमा ? आज सम्म पनि म अन्योलमा नै छु ! खै साँच्चै तिजको व्रत पतिको रक्षार्थ वस्ने भए भाउजुले के विगारेकि थिइन र ति दुई साना नानीहरु टुहुरा भएका ? सबैको भन्दा बढी आस्था थियो उनको भगवान प्रति, तर पनि उनलाई नै भगवानले एक्लो (विधुवा) बनायो ।
पति राम्रो पाउन व्रत वस्ने दिदीबहिनीहरु र पतिको दिर्घायुको कामनामा व्रत बस्ने महिला दिदीबहिनी तथा आमाहरु के साच्चै हजुरहरु निराहार दिनभरि बसेको व्रतले पुरुष दाजुभाई तथा बुबाहरु अहिले सम्म स्वस्थ्य रहनु भएको हो । परापूर्व काल देखि चलिआएको तिजको व्रत जसले सम्पूर्ण पुरुष दाजुभाईको दिर्घायुको कामनामा स–सम्मान पानीको त के कुरा थुक सम्म ननिली बसिने व्रतले हजारौं मानिसको आयु लामो हुनु पर्ने तर, हामी सवैलाई इतिहास त अवगतै होला ?
पानी पनि नपिइ आफ्नो पति वा हुने वाला पतिको लागि व्रत बस्ने महिलालाई थाहा छ कि त्यहि पति वा हुने वाला पतिले उसको बारम्बार बलात्कार गरिरहेको हुन्छ । विवाह अगाडी परिचित वा अपरिचित पुरुष अथवा विवाह पछि आफ्नै श्रीमानले । कतिपय दिदी वहिनीलाई लागि रहेको होला कि यो पागलले के लेखेको ? तर मानिस (महिला÷पुरुष) को दिमागमा कुनै पनि राम्रो महिला÷पुरुष (हाम्रो समाजको हिसावमा वत्तिस लक्षिणले युक्त र अहिलेको समयमा सेक्सी) लाई देख्दा उक्त मानिसले राम्रो मानिस संग मानसिक तवरवाट सहवास गरिसकेको हुन्छ । त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि मानिसलाई तगातार ३ सेकेण्ड भन्दा बढी समय हेर्दा सताएको वा गलत दृष्टिकोणले हेरेको वा (harrasment) गरेको भन्ने बुझिन्छ ।
समस्त नारी जाति यस धर्ती र सृष्टिका लागि अनुपम वरदान मान्ने हाम्रो वैदिक सनातन भन्न रुचाउने हिन्दु समुदाय किन महिलालाई मात्र पुरुषको निम्ति पानी पनि पिउन नदिइ व्रत बसाइएको ? खै त पुरुषले चाही आफ्नो श्रीमतीका लागि एकदिन पनि उसको स्वास्थ्य र दिर्घायुको कामनामा व्रत बसेको ?
तिजको व्रत संगै रहने ऋषिपञ्चमी महिलाले बर्ष भरिको पाप पखाल्ने दिन । पाप पनि के को भन्दा प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहार को । त्यो उपहार जसले गर्दा एउटी महिला आमा हुन्छिन् । र त्यही आमाबाट भएको सन्तानलाई देखाएर पुरुषले आफ्नो मर्दाङ्गीको ध्वाँस देखाउछ । अनि त्यही महिलालाई उक्त प्रकृतिबाट प्राप्त उपहारको निम्ती पाप भनी पखाल्नलाई व्रत बसाइन्छ त्यो पनि त्यी सात जना पुरुष (सप्तऋषिः काश्यप, वशिष्ठ, आत्री वा आत्रय, विश्वामित्र, गौतम, जमादाग्नी र र्भाद्ववज ) लाई पुजेर ।
बर्षौं देखि चलिआएको महिलालाई दास बनाउने प्रथा अहिले पनि हाम्रो समुदायमा धुमधाम संग महिलाहरुले नै परम्पराको रुपमा मनाइरहनु भएको छ । भविष्यमा राम्रो पति पाउने आशमा अहिलेका मोर्डन सोसाइटिका भन्न रुचाउने दिदीबहिनी पनि व्रत वस्न पछि हट्नु हुन्न ।
यो लेखको आशय महिलाहरुको महान चाड तिजमा रमाइलो गर्न, भेटघाट गर्न, व्रत बस्न र कुनै पनि प्रकारको मनोरञ्जनलाई रोक्नु होइन् । तपाई निराहार बसेर तपाईको पति वा पत्निको आयु चाँही अवश्य बढ्दैन् ।
पति र पत्निले एक अर्काको दिर्घायु र राम्रो चाहनुहुन्छ भने सुख दुःखमा आफ्नो जिवनसाथीलाई साथ दिनु, गक्ष अनुसारको चाडपर्व मनाउनु, आफुलाई व्रत बस्न मन भए बस्नु तर अरुलाई कर नगर्नु । वास्तविकतामा रमाउनु अन्धविश्वासमा हैन् । तिजको शुभकामना ।